सेनाको इतिहासमै पहिलो पटक महिलामात्र रहेको गोरखकाली गु’ल्म स्थापना ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सेनाको इतिहासमै पहिलो पटक महिलामात्र रहेको गोरखकाली गु’ल्म स्थापना !
सेनाको इतिहासमै पहिलो पटक महिलामात्र रहेको गोरखकाली गु’ल्म स्थापना !
काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै नेपाली सेनाले पनि समावेशीकरण र समान अधिकारको सि’द्धान्तलाई आत्मासाथ गरेको छ । नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलो पटक महिलामात्र रहेको गोरखकाली गु’ल्म स्थापना गरेर नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि आ’त्मासाथ गरेको छ ।
नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आ’त्मासाथ गर्दै २०६० बाट महिलालाई प्राविधिकको रुपमा भर्ना शुरु गरेको थियो । महिलालाई प्राविधिकको रुपमा भर्ना शुरु गरेको नेपाली सेनाले पहिलो पटक १४ वर्षपछि विधिवत् रुपमा महिलालाई मात्र समेटेर गोरखकाली गु’ल्म स्था’पना गरेको छ।
मुलुक सं’घीय संरचनामा रु’पान्तरण भएसँगै नेपाली सेनाले पनि स’मावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आ’त्मासाथ गरेको गु’ल्मपति सुमित्रा खत्रीको भनाइ छ ।२०७४ साउन १ गतेबाट स्था’पना भएको महिलामात्र रहेको गोरखकाली गु’ल्ममा हाल एक सय ८२ जना ज’वान (न’फ्रि) रहेका छन् ।
२०६० मा नेपाली सेना प्रवेश गरी अन्य सै’निक सरह तालिम र कार्यका साथै शा’न्ति सेनामा समेत आफ्नो जि’म्मेवारी सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी हाल महिला गुल्ममा प्रमुखको भूमिका नि’र्वाह गर्दा धेरै कुरा सि’क्न पाएको गु’ल्मपति खत्रिको भनाइ छ ।
अन्य सै’निक, गु’ल्म, र पृ’तनाले जस्तै वि’शिष्ट व्यक्तिको सु’रक्षादेखि यस गु’ल्मले सबै काम महिलाबाटै गर्ने, गराउने गरेको र अन्य गु’ल्म, ग’ण र पृ’तनाभन्दा कत्तिपनि कमी नभएको सि’पाही रोशनी चौलगाईँको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको ब’दलिदो परिवेशलाई आ’त्मासाथ गर्दै महिला मात्रको गोरखकाली गु’ल्म स्था’पना गरेर इतिहास र’त्न सफल भएको छ । तर, आगामी दिनमा नेपली सेनाले यस गोरखकाली गु’ल्मलाई ग’ण र पृ’तनामा विकास गर्छ या गर्दैन भविष्यमा देखिने नै छ।
हिमालय एयरलाइन्सका एकजना पाइलटलाई कोरोना संक्रमण
पारस शाह र हिमानीको डिर्भोस भएको हो ? वास्तविकता यस्तो रहेछ [भिडियो ]
विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनाए सहमत !
नेपालीहरुका लागी आयो अहिलेसम्मकै खुशीको खबर, आज कोरोनालाई जितेर थप १०२ जना घर फर्किए,कोरोनालाई जित्नेको संख्या ४६७ पुग्यो
साउदीमा भिसा र अकामा म्याद सकिएर बसेकाहरुलाई खुशीको खबर